Dhageyso: Xildhibaanada Kacdoonka ku bilaabay Xukuumada RW kheyre oo Hal Arin ku Hanjabay Xili Berri.. | Badweyn.com
Dhageyso: Xildhibaanada Kacdoonka ku bilaabay Xukuumada RW kheyre oo Hal Arin ku Hanjabay Xili Berri..
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay go’aankii ka soo baxay Golaha Wasiirada ee ku aadanaa Qalbi-dhagax in uusan aheyn mid ay filayeen shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay arrintii Qalbi-dhagax raggii ka dambeeyay in ay ahaayeen dad tira kooban oo shakhsiyaad ah, oo la sheegi karo magacyadooda, balse aysan muuqan in la soo hordhigo Gole Wasiiro, go’aanana ay ka soo saaraan.
Sidoo kale wuxuu sheegay xildhibaanka Xukuumadan in aysan aheyn mid ka turjumeysa shacabka Soomaaliyeed rabitaankiisa, falkana uu yahay mid meel ku dhac u ah sharafka Soomaaliyeed.
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo fara badan oo uu ka mid yahay go’aankii ka soo baxay Golaha Wasiirada Soomaaliya, kaasi oo ku saabsanaa dhiibistii Qalbi-dhagax.
Guddiga ayaa isku raacay in go’aanka xukuumadda laga dhigo waxyaabaha ugu horeeya ee looga hadli doono fadhiyada guud ee Golaha shacabka, gaar ahaan kulanka ugu soo horeeya maalinta Sabtida ah.